ဟိုဆေးမှ Miguel | | ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ပညာရေး
အသိပညာသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ထိရောက်သောလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်အတွေးအခေါ်အချို့ကိုဆွဲယူပြီးလုံလောက်သောခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသ လူ့အသိပညာအားလုံးသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်ရှိသည်နှင့်ဘာသာစကားအသုံးပြုမှုမှတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အထူးသဖြင့်အယူအဆပေါ်မူတည်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှထပ်မံပြောကြားခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တစ် ဦး ကိုပြပါလိမ့်မည် အသိပညာ၏အဓိကအမျိုးအစားများနှင့်အတူစာရင်း ငါတို့သိရမယ်၊
1 တိကျတဲ့ function ကိုအဖြစ်အသိပညာ
2.2.1 အသိပညာကို ဦး တည်
2.2.2 Axiomatic အသိပညာ
6.3 vulgar အသိပညာ
တိကျတဲ့ function ကိုအဖြစ်အသိပညာ
သီအိုရီဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အတွက်ဖြစ်သည် အမှန်တရားကိုဖွင့်ပြခြင်းအားဖြင့်အမှန်တရားကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားသည်အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
သိပ္ပံနည်းကျဗဟုသုတသည်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍ နည်းစနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ အဖြေများကိုအနက်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့်အဖြေများရရှိသည်။
၎င်း၏ဒphilosophနိကဗေဒအသိပညာသည်တူညီသောဗဟုသုတကိုရှာဖွေသော်လည်း၎င်း၏အုတ်မြစ်များအပေါ် အခြေခံ၍ အရေးပါသောရှုထောင့်မှကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ချက်တွေကိုအခြေခံတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တရားပေါ်အခြေခံတဲ့အသိပညာအမျိုးအစားတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက် Self- ထင်ရှားအမှန်တရားများအဖြစ်လက်ခံပါ။ ဤတွင်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါပုဒ်မခွဲခွဲရှိသည်။
သို့သော်ရိုးရာဗဟုသုတသည်မျိုးဆက်မှတစ်ဆက်သို့ယဉ်ကျေးမှုအရကူးစက်သောအရာဖြစ်သည်။ ဤဗဟုသုတအမျိုးအစားတွင်အောက်ပါကဏ္aခွဲတစ်ခုလည်းရှိသည် -
၎င်းတို့သည်ကွဲပြားသောပထဝီဝင်အနေအထားများအကြားကူးစက်ပျံ့နှံ့နေပြီး၎င်းသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အလွန်ကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။
လက်တွေ့ကျသောဗဟုသုတနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့သည်ရည်ရွယ်ထားသူများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်သောလုပ်ဆောင်ချက်လေ့လာပါ.
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ရည်မှန်းထားသောရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပတ်သက်၍ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။
အနုပညာဗဟုသုတဖြစ်ပါတယ် ဗေဒ sensitivity ကိုနှင့်အလှအပ၏အသုံးအနှုနျး၏လိုအပ်ချက်ကနေပေါ်ထွက်လာသောလက်တွေ့ကျတဲ့အသိပညာ လူ့ဖြစ်တည်မှုအားဖြင့်။
နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတဆိုသည်မှာအသုံးချခြင်းသို့တက်ရောက်သူများသည်၎င်းတို့အသုံးချသည့်နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးအပေါ်အခြေခံပြီး၊ ဤကိစ္စတွင်စီးပွားရေးထုတ်လုပ်မှု၊ ပြည်တွင်းစီးပွားရေး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေး ဦး တည်ချက်များဖြစ်သောဖြစ်နိုင်ခြေလေးခုကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာမူကား၊ အခြားသောအသိပညာအားလုံးသည်တရားဝင်အသိပညာ၏စာရင်းထဲမကျပါ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှာနိုင်သည်။
အသိပညာကို ဦး တည်
ဒါဟာနောက်ဆုံးအကြောင်းတရားများ၏ရှင်းပြချက်စစ်မှန်တဲ့, ဆိုလိုသည်မှာအဖြစ်ရည်ညွှန်းသောပစ္စည်းအသိပညာဖြစ်ပါတယ် သိပ္ပံနည်းကျသီအိုရီများ.
ထုတ်ဖော်ခြင်း၏သဘောသဘာဝအပေါ် အခြေခံ၍ အများပြည်သူ၊ သီးသန့်၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊
သို့သော်ပုဂ္ဂလိကအသိပညာဆိုသည်မှာ၎င်းကိုထိန်းသိမ်းထားသူတစ် ဦး ဦး မှမွေးဖွားခဲ့သောအရာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အများပြည်သူအသိပညာတိုးပွားလာရန်အုတ်မြစ်ချသည်။
၎င်းသည်လူတစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့လွယ်ကူသောနည်းဖြင့်ကူးစက်နိုင်သည်။
၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံများ၊ အလေ့အထများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနည်းလမ်းများအပေါ်အခြေခံသည်။
ဗဟုသုတနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဗဟုသုတနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါနည်းလမ်းသုံးခုရှိသည်။
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများapriori အသိပညာ, အဘယ်သူ၏သတင်းအချက်အလက်အပေါ်အခြေခံသည်တစ်ခုဖြစ်သည် ဆွေးနွေးနေသောအကြောင်းအရာအပေါ်အခြေခံပြီးယုတ္တိဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပါနှုတ်ယူခြင်းမှနိဂုံးချုပ်နိုင်ရန်ဤအတွေ့အကြုံကိုယ်တိုင်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ် တစ် ဦး posteriori အသိပညာ, ဒါကြောင့်သတင်းအချက်အလက် induction မှကောက်ချက်ချရသောနှင့်အတူတ ဦး တည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံတစ်ခုတည်းကိုသာ အခြေခံ၍ အသိပညာအကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်ရာ၎င်းကိုစကားလုံးများဖြင့်ဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းသည်။
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထုတ်ဖော်ရေးအထောက်အပံ့အပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ဖော်ပြပါအခြားနည်းလမ်းလေးခုရှိသည်။
၎င်းသည်သိပ္ပံဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုသောအသိပညာနှင့်အုပ်စုအတွင်းသဘောတူထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့၊ ယဉ်ကျေးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဲ့သို့ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်အဖြစ်နားလည်နိုင်သည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ ဂိုဏ်းဂဏများနှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်ဗဟုသုတနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် အခြေခံ၍ အုပ်စုအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဂီတ၊ ပန်းချီ၊ စာပေ၊ ပန်းပု၊ ပြဇာတ်ရုံနှင့်အခြားအနုပညာလက်ရာများမှရရှိသောအရာဖြစ်သည်။
ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းကိုအထူးချွန်ဆုံးသောအသိပညာများဖြင့်အပြီးသတ်။ သင်တစ်ယောက်ချင်းစီကိုကောင်းစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မည်၊ ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ထူးခြားချက်များကို အခြေခံ၍ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ၎င်းတို့ရရှိသောနည်းလမ်းကိုမီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်လမ်းကြောင်းမှထုတ်လွှင့်သည်နှင့်၎င်းသည်ရည်ရွယ်ထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်စီမံထားသည့်နည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအမျိုးအစားခွဲခြားမှုကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့သည်တစ်ခုချင်းစီကိုပိုမိုနားလည်ပြီးလေ့လာနိုင်လိမ့်မည်။ ဤအသဘောတရားများ၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » ဤရွေ့ကားအသိပညာအထင်ရှားဆုံးအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်
Nicolas GSCHWIND ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ပြည့်စုံပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောဂုဏ်ပြုလွှာများ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤစာလုံးနှစ်လုံးကိုအတူတကွထားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ မကြာသေးမီကပြသခြင်းသည်ဉာဏ်ရည်သည်အလွန်ပြည့်စုံသောအယူအဆဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့တွင်သင်္ချာနှင့်ယုတ္တိဗေဒပြproblemsနာများအတွက်စက်ရုံရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်အသိဉာဏ်ရှိသူတစ် ဦး အကြောင်းပြောဆိုခြင်းမရှိတော့ပါ၊ အခြားတစ်ခုထက်ပိုသောနေရာတစ်ခုရှိခြင်းကြောင့်ထိုအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲအခြားတစ်ခုထက် ပို၍ ဥာဏ်စွမ်းရှိတတ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဥာဏ်ပညာသည်သင်သိသောအရာမဟုတ်ပါ၊ သင်မည်မျှမြန်မြန်သင်ယူသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်သည်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်အားစွန့်ခွာလျှင်သင်လိုချင်သည့်အရာအကြောင်းသင့်အားအသိပေးရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစာတိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးများကိုကြည့်ပါ။
NICOLÁS GSCHWIND သို့ပြန်ပြောပါ